Yekupedzisira Mari Yekutevera yeBhizinesi Rako
Features » Mari Yekutevera
Ita shuwa kuti zvese zvinodhura zvezvinhu zvako zvakawanda zvakaverengerwa uye zvinoenderana neyakakodzera unit.
Zviri nyore kuwedzera purofiti nekunyatsogadzirisa zvaunoshandisa pane kuwedzera zvishoma kutengesa kwako. Nekudaro, kune makuru-emahombekombe emahofisi emahofisi embairo emahoridhe, zvinogona kuve zvakaoma kwazvo kuteedzera mari inoshandiswa nevashandi vakasiyana siyana vakamiririra varidzi vevatatu-vebato.
Kunze kwekuve nekuona kuti hapana mari inoenda isina kupihwa, zvinonyanya kukosha kuona kuti mari yega yega yakagoverwa kune chaiyo chivakwa. Kunyange zvichikwanisika kuramba uri pamusoro pemari uye mari uchishandisa wechitatu-bato accounting software senge Xero, kazhinji izvi hazvibvumidze purofiti kuverengerwa zvakazara zvichibva pa trust accounting, uye zvakare hazvikugonesa iwe kubvumidza varidzi vako kuteedzera yavo purofiti munguva chaiyo.
Zeevou's Mari Yekutevera Inogona Sei Kubatsira?
Kwete chete iyo Zeevou inokutendera iwe kuti uteedzere Réservation-zvakada mari zvakaita se OTA makomisheni, housekeeping mari, kana mutengo wekutengesa, neZeevou's Expense Tracking ficha iwe unogona zvakare kunyora chero imwe mhando yemubhadharo.
Iyo sisitimu inoshanduka zvakanyanya mukukubvumidza iwe kuti ugadzire tsika dzemhando dzemhando, uzvibatanidze neakaundi account uye shandisa kodhi yemutero yesarudzo yako. Zvakare, mari dzinogona kupihwa ku nhanho yezvivakwa, chikamu cheyuniti, kana kunyangwe chikamu chebhuku. Chikamu cheyuniti kugoverwa kunogona kuitwa zvichienderana nenhamba yemayuniti mukati meimba, kana inogona kuyerwa zvichienderana nekuwanda kwemabhuku chimwe nechimwe chine mumwe mwedzi.
Zvese mari zvinowedzerwa muZeevou zvinotarisirwa muNyaya yeMubhadharo Yepamwedzi inogadzirwa pachibvumirano chese chaunotsanangudza muhurongwa hwemushambadzi. Izvi zvinobvumira izere kuongorora purofiti kuti zviitwe, zvichigonesa iwe kuwedzera bhizinesi rako zvichibva pakunzwisisa kwakazara kweicho chaicho purofiti pane kubhucha-inoenderana inoenderana yakanaka mari-kuyerera. Panguva imwecheteyo, iko kuwana kwevaridzi kuburikidza ne muridzi portal inopa varidzi kuti iwe ugone kuve unogovana nerunyararo rwepfungwa kuti iwe unonyatsojeka navo. Ivo vanogona kuve nechokwadi kuti uri kunyatso kuteedzera zvese zviri zviviri mari irikugadzirwa, pamwe nechero mari yaunogona kuvaitira.